Uzbekistan inotangisa chirongwa chemakore mashanu chekuchengetedza chikafu - "Potato System" magazini
kuru nhau Nhau dzenyika
в Nhau dzenyika
Bazi rezvekurima reUzbekistan neInternational Potato Center (CIP) vari kuvhura chirongwa chemakore mashanu "Kuvandudza kuchengetedzwa kwekudya uye kugadzikana kwemamiriro ekunze muUzbekistan kuburikidza nekuuchika uye kugadzirwa kwembeu yematatata uye mbatatisi".
Sekutaura kwenyanzvi, zvirimwa izvi zvine mukana mukuru wekurima munyika, sezvo zviine gohwo repamusoro, zvichirwisa kusanaya kwemvura uye zvichirwisa kushushikana.
“Mbatatisi chirimwa chine hungwaru kuUzbekistan uye chinotora imwe yenzvimbo dzekutanga mubhasikiti revatengi revagari. Chinangwa cheCIP mishoni mumakore anotevera mashanu kusvika makore gumi muRepublic of Uzbekistan kugadzira Center for Advanced Research and Development mumunda wembatatisi nekugadzira mbatatisi. Mhedzisiro inotarisirwa ndeyekuwedzera kwegoho rezvirimwa neinosvika makumi matatu muzana, zvinova zvinowedzera purofiti yevarimi neinenge 5%, ”akadaro Rusudan Mdivani, mumiriri weCIP muCentral Asia neCaucasus, pane mumwe wemisangano yekushanda.
Kubatana neCIP uye kuvhurwa kwenzvimbo kunoitirwa kuwana zvinotevera zviwanikwa muUzbekistan:
kuvandudzwa kwekugadzirwa kwembeu dzemuno, kuvandudzwa kwemhando itsva dzemuno dzinopa mbatatisi dzakawanda dzinoshora kusanaya kwemvura, zvirwere nezvipukanana.
kupa mazano kuvarimi nekutora kwenyanzvi dzinotungamira pasirese mumunda wekurima mbatatisi;
kuunzwa kweiyo nyowani kutenderera chirimwa sisitimu yembatatisi uye zviyo zvirimwa, pamwe nehunyanzvi hwekuchengetedza nekugadzirisa nzira;
kufambira mberi kwekudzidzira kwevaUzbek vafudzi uye nyanzvi mukukura kwembatatisi;
kuwedzera kugadzirwa kwemhando yepamusoro yemidziyo yemapatatisi uye mbatatisi kubva kuzvizvarwa zvevanyoro uye vakuru vepamusoro.
Zvekureva: pakutanga, muna 2005-2016, hofisi yeCIP yedunhu yaishanda muTashkent, iyo yaiita zviitiko muCentral Asia. Mu2015, semhedzisiro yekushanda pamwe chete neInstitute of Bioorganic Chemistry yeChikamiro cheSainzi yeRepublic yeUzbekistan, "Biotechnological collection yemapatatisi" yakaumbwa muUzbekistan, ichiverengera mazana matatu nemakumi matatu nematatu emakondoni nematombo matatu ematapiri, inotamisirwa neCIP kuenda kuUzbekistan muchimiro chemavirosi michero yekuparadzira uye kuyedza. Zvakare mu132, iyo Sayenzi Yekutsvagisa Institute of Vegetable uye Melon Zvirimwa uye Mbatatisi zveUzbekistan, nerutsigiro rweCIP, yakaburitsa mapfumbamwe marudzi emhando yemapatata, mana acho akaverengerwa muHurumende Rejista (Sarnav, Serhosil, Baraka, Pskom) .
Tags: kubereka mbatatisi uye kugadzirwa kwembeuUzbekistan
Varimi vadiki vembatatisi kumaodzanyemba kweUkraine havagone kutengesa zvirimwa zvavo